Naing BSell | Item - Snail white body lotion SPF 90+
Snail white body lotion SPF 90+
Pai Ti Online shopping (09:773189323)
ဂွမ်းဘီရှည် အကောင်း |( အသားက မထူမပါးပါ)
စပေါ့ဂါဝန် လက်တကိုင်း ၃ထပ် ပုံ
ထိုင်းပုးဒူးနား ဝမ်းဆက် 14000/-
အစင်းရှပ် ၂ ထပ် ၂ ရောင် .2371s Size. M ...to ...xxl အရော Ws. 7000 for5Prepaid မန်း
💝💝snail white body booster သည် snail secretion (ခရုရဲ့အချွဲ) နှင့် ceramide ပါဝင်ပြီး SPF+++90 တောင်ပါတာမို့နေလောင်ဒါဏ်ကိုအထူးကာကွယ်ပေးပါတယ် Glutaပါဝင်တာမို့ အသားအရောင်မညီခြင်းနှင့် နေလောင်ထားသောအသားအရေကို ပြန်လည်ဖြူဝင်းလာစေရန်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
💖💖💖snail white body lotionသည်သာမာန် lotion လိမ်းသကဲ့သို့ ရေချိုးပြီးလျှင် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လိမ်းပေးရပါမည် ။ snail white body lotion ကိုလိမ်းထားလျှင်စေးကပ်ခြင်းမရှိဘဲ အရေပြားအတွင်းပိုင်း အထိ လျှင်မြန်စွာစိမ့်ဝင်ပြီး အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေစေအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတရ်